ငွေနှင်းမှို အကြွပ်ကြော်(သို.) မှိုခြောက်စပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငွေနှင်းမှို အကြွပ်ကြော်(သို.) မှိုခြောက်စပ်
ငရုတ်ကြမ်းမှုန်. ....... ၂ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
အ၀တ်သန်.တစ်ခုနှင့် ရေတွေကိုတတ်နိူင်သမျှ ခြောက်အောင်လုပ်ပေးပါ။
မှိုတွေအနည်းငယ်ခြောက်ပြီဆိုရင်..ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်.
( အကြွပ်ကြော်ဆိုပေမယ့်..အားလူးကြော်တို.လောက်မကြွပ်ပါဘူး )
ငရုတ်ကြမ်းမှုန်.တွေထည့်ပြီးဆား+ ဟင်းခတ်မှုန်.( ငရုတ်သီးအတွက်) ထည့်
ကာ ၁ လက်မခန်.လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်မြိတ်တွေပေါင်းထည့်ပါ။
လိုက်ရင်..မှိုအကြွပ်ကြော်( သို.) မှိုခြောက်စပ်စားလို.ရပါပြီ။